Faahfaahin: Dagaal ka dhacay duleedka Magaalada Marko & Ra'iisal wasaare Kheyre oo ku sii jeeda | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
XOG: Gooni isu-taag noocee ah ayey Puntland qorsheyneysaa inay ku dhawaaqdo..?
Waxaa soo baxaya qorsha uu wado maamulka Puntland oo ku saabsan inay ku dhawaaqo 'GOONI-ISU-TAAG' nooc cusub ah oo ay xiriirka ugu...
XOG: Sidee Ahlu suna u eersatay kalsoonidii ay saaratay Mareykanka? (Halistii saacadihii ka horeeyay Doorashada Qoorqoor?)
Kooxda Ahlusuna ayaa shuruud ka dhigtay heshiiskii ugu danbeeyay ee ay la gashay Xukuumadda Soomaaliya inuu Mareykanku damaanadqaade ka noqdo oo aysan...
Ra'iisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa goor dhoweyd soo bandhigay Khariirad (Map) aan hore loo arag oo dhulka Soomaalida ka jaraya...
Cudurka Corona virus oo Dadkii ugu horeeyay ku dilay Yurub iyo Afrika. (66,000 qof oo qaba cudurkan ayaa..)
Bukaankii ugu horeeyay ayaa la shaaciyey inuu cudurka Coronavirus ugu dhintay Yurub, kadib dalxiise Shiinees ahaa oo ku geeriyooday dalka Faransiiska.
Dagaalkii ugu cuslaa oo dhex maray Ciidamada dalalka Turkiga & Syria (5 askari oo Turkiga laga dilay & Jawaab..)
Dagaalkii ugu cuslaa ee dhex mara ciidamada Turkiga iyo Syria ayaa maanta ka dhacay Gobolka Idlib kadib markii duqeyn ay ciidamada Syria...
Maamulka iyo Siyaasiyiinta Mandheera oo C/rashiid Janan & Ciidamadiisa ka dalbaday inay ka baxaan Mandheera.
Maamulka Mandheera iyo xildhibaannada degaankaasi laga soo doorto ayaa dalbaday in C/rashiid Janan iyo ciidamadiisa inay ka baxaan Mandheera.
Sidee u baxsaday Wasiirkii Amniga Jubbaland ee maxbuuska ahaa C/Rashiid Janan..? (Akhriso Qiso yaab leh…)
Wasiirkii Amniga Maamulka Jubbaland C/rashiid Xasan C/nuur (Janan) ayaa la xaqiiijiyey inuu ka baxsaday dowladda Soomaaliya oo uu u xirnaa muddo 5...
Madaxweynaha Deni oo magacaabay Guddiga qabanqaabada shirweynaha aayo-talinta Puntland, una dhoofay…
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni magacaabay Guddiga Qabanqaabada Shirka Wada-tashiga ee maamulka Puntland oo ka kooban 11 xubnood.
Muuse Biixi: “Aniga & Farmaajo waxaan Abiy Ahmed ka aqbalnay inuu na dhexdhexaadiyo..” [Akhriso]
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay kulankii magaalada Addis ababa ku dhex maray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, kasoo uu...
Wasiir Maareeye: “28 sano aydey Somaliland lahayd hal siyaasad oo Marfishyada looga taliyo..”
Wasiirka Warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka hadlay sida uu u arko booqasho uu Madaxweyne Farmaajo ku tago magaalada...
Sidee lagu xaliyey khilaafkii Shahaadada Ardayda Puntland? (Madaxda Dowladda & Puntland oo wadahadlay)
Qaar ka mida xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka ee kasoo jeeda degaanada Puntland ayaa shaaciyey in xal laga gaaray arrintii shahaadada ardayda dugsiyada sare...
Faahfaahin: Dagaal ka dhacay duleedka Magaalada Marko & Ra’iisal wasaare Kheyre oo ku sii jeeda
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal ka dhacay duleedka magaalada Marko ee Gobolka Sh/Hoose oo dhex maray ciidamada dowladda iyo Maleeshiyada Alshabaab.
Wararka ayaa sheegaya in 5 qof lagu dilay dagaalka oo ka dhacay agagaarka magaalada Marko oo la sheegay inuu socdaal ku tegi doono Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. Dagaalka ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii Guutada 14-ka Oktoobar ee Milateriga Soomaaliya ay fariisimo ka samaysteen duleedka Magaalada, halkaasoo ay weerar kedis ah ku soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Magaalada Marko ayaa la sheegay inay ka socoto qabanqaabo weyn oo loogu jiro soo dhoweynta Ra’iisal wasaaraha, waxaana halkaasi dhaqdhaqaaq ka bilaabay ciidamada dowladda oo lagu kordhiyey ciidamo cusub si loo adkeeyo amniga magaaladaasi.
Qasaaraha dagaalkii xalay ayaa lagu sheegay shan ka mida labada dhinac, waxaana ciidamada dowladda looga dilay dhowr askari, iyadoo maleeshiyada Alshabaab ay soo gaartay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira.
Ciidamada dowladda ayaa sheegay in guutada 14-ka Oktoobar ay howlgal ka fuliyeen degaanka Jilib Marka ee Gobolka Shabeellada hoose, halkaasoo lagu bur-buriyay fariisimo ay ku lahaayeen malleeshiyada Al-Shabaab, iyadoo howlaglkan lagu dilay ilaa 6 xubnood oo ka tirsanaa Alshabab.
War kale oo warbaahinta dowladda Somalia baahisay ayaa lagu sheegay in Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay xalay magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/Hoose ku dileen in ka badan 10 maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab, qaar kalena nolosha ku qabteen markkii ay isku dayeen inay carqaladeeyaan Nabadda magaaladaasi.
Ra’iisal wasaare Kheyre oo socdaal ku maraya degaanada maamulka K/Galbeed ayaa lagu wadaa inuu Sabtida tago magaalada Marko, isagoo hore socdaal ugu maray magaalooyinka Baydhaba iyo Xudur.
Previous articleWasaaradda Gaadiidka Somalia oo ka baxday Heshiisyo aan hore loo shaacin oo ay kula jirtay 5 Shirkadood [Akhriso]
Next articleSafiirka cusub ee Dowladda Somalia u magacawday Mareykanka 20 Bilood kadib oo Aqoonsigii laga guddoomay
Ehelada Haweeney dishay Gabar Adeegto u ahayd oo faahfaahin ka bixiyey sida falkaasi u dhacay..
Talyihii Booliska degmada Wadajir oo xilka looga qaaday Fal Alshabaab ka fulisay degmadiisa & Taliye…
Xukun lagu riday Weriye u shaqeynayey Warbaahinta Alshabaab oo hore ay NISA usoo bandhigtay.
Maleeshiyo ka tirsan Alshabaab oo Weerar ku qaaday magaalada Jowhar iyo Faahfaahin laga bixiyey